Vaovao - resina fifanakalozana cation: fampiasana sy fikojakojana
Resina fifanakalozana cation: fampiasana sy fikojakojana
Amin'ny dingan'ny fampiasana ny resina dia tokony hialana ny fandotoana ny zavatra mihantona, ny zavatra biolojika ary ny solika, ary ny fisorohana mafy ny rano maloto sasany amin'ny resina dia tokony hialana. Noho izany, ny ion-by mahery dia tokony hesorina alohan'ny hidiran'ny rano maloto asidra asidra ao amin'ny resina anion hisorohana ny fifindran'ny metaly mavesatra amin'ny resina. Rehefa mandeha ny fitaovana tsirairay, ny rano maloto ao amin'ny tsanganana AC dia haverina hiverina any amin'ny fitoeran-drano fako, ary avy eo alemana ao anaty rano paompy na rano voadio fa tsy. Rehefa feno ny resina dia tsy mety ny milentika sy mijanona amin'ny vahaolana tany am-boalohany nandritra ny fotoana ela taorian'ny feno, ary tokony hosasana ara-potoana.
Na resina cation io na resin anion, rehefa ampiasaina mandritra ny tsingerina maromaro dia hihena ny fahaizan'ny AC. Amin'ny lafiny iray, ny anton'ny fihenan'ny fahafaha-manao dia tsy feno ny fisafidianana, ary ny habetsahan'ny ion amin'ny resina izay tsy midina dia miangona tsikelikely, izay misy fiatraikany amin'ny fifanakalozana ara-dalàna; Etsy ankilany, H2CrO4 sy H2Cr2O7 ao amin'ny chromium misy rano maloto dia misy fiantraikany amin'ny oksidana amin'ny resina, izay mahatonga ny cr3 + mihombo hatrany amin'ny resina, izay misy fiatraikany amin'ny fiasan'ny resina mahazatra. Noho izany, rehefa manana fihenam-bidy lehibe ny fahaizan'ny resina dia tokony hotanterahina ny fampidirana resina.
Ny fomba fampandehanana ny resin'ny anion dia tokony samy hafa arakaraka ny rano maloto. Ny traikefa an-trano amin'ny fitsaboana chromium misy rano maloto amin'ny alàlan'ny fampandehanana resin anion dia mahomby. Ireto ny asan'ny fitsipika: soak ny resin anion amin'ny vahaolana 2-2.5mol / 1h2so4 aorian'ny mahazatra, avy eo mandray anjara amin'ny NaHSO3 ao anaty fifangaroana miadana, ary ahena ny cr6 + amin'ny resina ho cr3 +. Ny resina dia alemana anaty vahaolana etsy ambony mandritra ny iray andro sy alina, avy eo hosasana amin'ny rano madio. Avereno ny dingana etsy ambony ho an'ny teny 1-2, ary avy eo esory ao amin'ny résin ny cr6 + sy cr3 +, ary avy eo ampiasao ny NaOH hanova ampiasaina.
Ny tena tanjon'ny fampahavitrihana cation dia ny fanesorana ireo ion-by mavesatra voahangona ao amin'ny resina, indrindra ireo cations misy vidiny manana hery mifamatotra mafy miaraka amin'ny resina, toy ny fe3 +, cr3 +. Azo ampidirina anaty vivo izy io. Ny habetsaky ny rano mihetsika dia avo roa heny noho ny haben'ny resina. Fitaovana asidra hydrochloric miaraka amina famokarana 3.0mol / 1 no ampiasaina. Ny sosona resin dia alona amin'ny tahan'ny fikorianan'ny 1-2 heny ny haben'ny resina, ary ny vahaolana dia 2.0-2.5mol / 1 vahaolana asidra solifara. Iray andro sy iray andro (fara fahakeliny, adiny 8). Ny fe3 +, cr3 + ary ny metaly mavesatra hafa ao amin'ny resina dia esorina amin'ny ankapobeny. Aorian'ny famafana dia azo ampiasaina ny résin.